रविको कथा देशको ब्यथा | रुपान्तरण
रविको कथा देशको ब्यथा
काठमाडौं र चितवनमा अहिले ‘रवि ज्वरो’ फैलिएकोछ । ज्वरोले मानिस बरबराएका छन । मीरा बाइले कृष्णको नाम लिए झैं युवा, युवती, प्रौढ र बृध्दाबस्थामा पुगेका मानिसहरु रविको नाम जप्दैछन । रमाइलो कुरा, उनीहरुलाई नै थाहा छैन किन यसरी सोत्तर परेका छन रविका नाममा उनीहरु ?
रवि लामिछाने अहिले पुलिस हिरासतमा छन । उनी र उनका सहयोगी युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीमाथि शालिकराम पुडासैनीलाई आत्महत्याको दुरुत्साहन गरेको अभियोग लागेको छ । शालिकराम पहिले रविकै टीममा थिए । पछि उनीहरुका बीच कुरा नमिलेपछि अलग भए । शालिकरामले भरतपुर, चितवनको होटलमा आफूमाथि आत्महत्यागर्न दवाव दिइएको बिलौना गरेको भिडियो क्लिप छाडेर आत्महत्या गरेपछि रवि र उनका दुई सहयोगी कँडेल र कार्की समेत आरोपित भएका हुन । प्रहरीले रवि र उनका सहयोगीलाई काठमाडौमा पक्राउ गरेर अनुसन्धानका लागि चितवन ल्याएपछि उनको समर्थनमा प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका हुन । अदालतले शुरुमा अभियुक्तहरुलाई पाँचदिन थुनामा राखेर अनुसन्धानगर्ने अनुमति दिएको थियो । मंगलबार फेरी थप पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति दिएकोछ ।
रविको कथा : रविको जीवनमा उतार-चढाव त आइ नै रहने गरेको हो । झण्डै दुई दशक अमेरिका बस्दा रविको जीवनमा धेरै उतार-चढाव आएको थियो । ती सबैलाई उनले सहज रुपमा लिए । धेरै समस्या उनको ब्यक्तित्वमा अड्डी जमाएर बसेको ‘कन्या राशि’ का कारण आइ पर्यो । पत्नीसंग सम्बन्ध बिच्छेद भयो । उनले आफना दुइजना छोरी रुचि लामिछाने र रिया लामिछानेको दायित्व आफनो काँधमा लिए । अहिले उनी नेपालका गरीब, दुःखी, बेसहाराका भगवान बनेका छन । उनका दुबै छोरी सुखपूर्वक अमेरिकामा पढदैछन ।
रवि अमेरिकाको राम्रो काम र समाजसेवा दुबै छोडेर नेपाल फर्किएका हुन । अमेरिकाका नेपालीहरु उनलाई राम्रो मानिसका रुपमा सम्झिन्छन । अमेरिकामा उनको राम्रो जागीर थियो । उनी ‘सब वे’ कम्पनीका म्यानेजर थिए । उनको मातहतमा दर्जनौं स्याण्डविच पसल थिए । हजारौं डलरको ब्यापार हुन्थ्यो । रविको राम्रो बानी, उनी अमेरिकामा काम खोज्ने नेपाली युवा–युवतीलाई काममा लगाइ दिन्थे । निकै मनकारी थिए । दुःख पाएका नर-नारीलाई सुखको बाटो देखाउँथे । जीवन यस्तै चल्दै थियो । यस्तैमा के-के भयो । उनको मूड चचहुई गर्यो । उनी एउटा अजंगको कार्यक्रम लिएर नेपाल आए । कार्यक्रमको नाम थियो : बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल अर्थात बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन । त्यो कार्यक्रम न्यूज २४ ले नै देखाएको थियो । रविले बुद्धको नाममा कार्यक्रम बनाउन त्यो समय नै किन चुने ? त्यसको जवाफ शायद रविले पनि पाएका छैनन । बुद्ध नेपालमा जन्मिएको बारे कुनै बिबाद नै छैन । जतिबेला बुद्ध जन्मिए त्यतिबेला उनी जन्मिएको भूमि नेपालमा थियो कि थिएन ? यो प्रश्नले जवाफ पाएको छैन । पाउने वाला पनि छैन ।
रविलाई नेपालको मिडियामा ‘चास’ बस्यो । उनी नेपाल आए । नेपालमा आमीर खानको सत्यमेव जयते जस्तो सिरियल बनाउन चाहन्थे उनी । तर, बनाउन सकेनन । आमीर खानसंग भेटेर सत्यमेव जयतेको नेपाली संस्करण निर्माणका लागि मेसो मिलाउन खोजेका थिए उनले । तर, आमीरले रविको प्रतिभा चिन्नै सकेनन । उनले रविसंग भेटेर सल्लाहगर्नु त कता कता, भेट्ने चासो पनि देखाएनन । रविलाई ‘कम्प्लिट्ली इग्नोर’ गरे आमीरले ।
यस्तै भो । रहँदा बस्दा उनले ठूलै काम पाए । कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि एमालेका केपी ओली देशका प्रधानमन्त्री भए । रविले नयाँ प्रधानमन्त्रीसंग सम्पर्क जोडे र प्रम ओलीका आकांक्षासंग परिचित भए । त्यसपछि नेपाल टेलिभिजनमा उनको कार्यक्रम शुरु भयो ‘सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसंग ।’ प्रम ओली बिरुद्ध अबिश्वासको प्रस्ताव आयो । ओली प्रम रहेनन । त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रविसंग सीधा कुरागर्न चाहेनन । उनको प्राथमिकतामा रवि परेनन । त्यसपछि रविले शुरु गरे “सीधा कुरा जनतासंग ।” उनले खाडीमा दुःख पाएर फर्किएका श्रमिक, बालुवा, गिट्टीका ठेकदारबाट दुःख पाएका मानिस र सरकारी कामबाट उक्ताएका ग्राहकलाई आफनो बृत्तमा बोलाउन थाले । यसरी जनतासंग कुरागर्दा रुवावासी, हाहाकार सबै हुन्थ्यो । सुधो नेपाली जनताको आँशु बडो सस्तो छ । जहाँ पनि चुहिइहाल्ने आँखाबाट । रविका लागि यो निकै ठूलो कुरा थियो । कार्यक्रममा आँशुको खोला बगेपछि कार्यक्रम हिट हुन्छ । रविको कार्यक्रम यसरी नै चल्दै गएको हो । यो कार्यक्रमले नेपाली समाजको उन्नतिमा के योगदान दियो ? यो संचारका पण्डितहरुले बताउलान । यो कार्यक्रम भित्रहुने चलखेलका बारेमा मरेका पुडासैनी र बाँचेका कँडेल र कार्कीलाई जानकारी भएको बताउँछन जानिफकारहरु । चलखेल न भै रविजस्ता भलाद्मी समाज सुधारक किन पुग्थे हिरासतमा ! दालमा कालो त पक्कैछ ।
एउटा घटनाको सम्झना आउँछ यहाँ । रविले बिहेपछि नगरकोटमा एउटा भब्य भोजको आयोजना गरेका थिए । भोजमा काठमाडौंका गण्यमाण्यहरुको बृहत्त उपस्थिति थियो । भोजमा सहभागी एक ब्यक्तित्वका अनुसार, कुन्नि किन हो, रविको भोजमा तस्वीर खिच्न र त्यसलाई फेसबुक लगायत सामाजिक संजाल मार्फत प्रसारणगर्न निषेध गरिएको थियो । यसको कारण यही होला कि, रविले जो संग बिहे गरे ती कन्या निकिता पौडेलका पिता प्रसिद्ध सिनेमा व्यवसायी तथा गोपीकृष्ण हलका मालिक उद्धव पौडेल हुन । उनी सिनेमा व्यवसायी मात्रै नभएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालका नेता तथा कोषाध्यक्ष हुन ।
रविलाई पुलिसले हिरासतमा लिएपछि काठमाडौं र चितवनमा जुन भीड देखा पर्यो त्यो पूरै अर्ज्ञानिक थिएन । त्यसको मतलव त्यसको अर्थ थिएन भन्ने होइन । नेपालमा अहिले सरकारी, न्यायिक र सामाजिक सेवाको बिक्रि जुन हिसावले भै रहेको छ त्यसबाट सामान्य जनताले दुख पाएका छन । रविले जनताको त्यो मनस्थिति बुझेका छन र त्यसलाई आफनो पक्षमा पार्न खप्पीस छन ।
रविको समर्थनमा उठेको भीडमा राप्रपा नेपालका कार्यकर्ता पक्कै मिसिएका छन । उद्धव पौडेल बिराटनगर नगरपञ्चायतका उप-प्रधानपञ्च भै सकेका नेता हुन । चितवनमा निकिता र उनको भाई निरकको सक्रिय उपस्थितिले पनि यही कुराको संकेत गर्दछ । भीडले लगाएको भनिएको गणतन्त्र बिरोधी नाराको संयोजन कसरी भएको छ त्यो छर्लंग नै छ । परिणाम जे होस, रवि पक्षको रणनीतिलाई मान्नै पर्दछ । तर, सबैले बुझनु पर्दछ – पपुलिजमसँग खेल्नु खतरनाक हुन्छ ।